लुत्तो : ह्याँती गर्ने कुरा - AahaSanchar
Home आहा बिचार लुत्तो : ह्याँती गर्ने कुरा
उइछारी, कक्कारीयौं बिउ झोक चल्दारी “क्या त्यो लाउछ र ?” भन्न्यिान्च भन्चौं । हजुर्रौ त्यो पुरानो वल्ड भइकिन पनि अल्तै बाँन्नाउ छ र ? क्या कुरा गर्दान र लाई ? “जत्ति बुर्रिने उत्ति सुर्रिने” भन्दाइनी उइत्ता हो नि हजुर्रौ लक्का जवानास्तो हेन्नोई । व्यभार र कारण पनि अचाक्ली नाम्रो, हजुरौं बाँस्सै निउरेइनी भन्चौं । आज्जौं कुरो भया भन्नु ? उइलै बाज्याबराज्वा पालिदेखि सौरियाउ भन्चौं । अरु सप्पै पुरानो चिज्माल माँस्यापन्तै हजुर्रौ खज्जमरी त्यो कइलै माँस्सिएन । हुन पनि त्यो मास्सिया ता जम्मै नास्सियो ग्यारै । कत्नाम्रो मान्साजातलाई ट्यामपास गर्ने बाटो भइद्याउछ । स्वादौं मुल्का नजर छल्नेछलाउने, राष्ट्रिय मित्रु सद्याचारीया गोज्जी भर्नेभराउने लगाइत मालिक मालिक्नियौं सेवाचाकरी गर्दारी मात्रै हो र ? एक्लाँस्या ठाउँनु हजुर्रा पिर्यापिर्री, मोख्यामोख्खि, पौनामैतालु, आप्नाबिराँन्ना पर्खिदारी कमसइकम मँठु¥र्या नङ्ग्राहरू उद्याउन ता पाइन्च । हुँइन्तो ? त्यो नहुन्थ्यो भन्या पर्खिनेवाल्लो नियास्यान्थ्यो ग्यारै । एक हिस्सापले मार्तै होइन दुई तीन हिस्सापले हजुर्रौ त्यो हितकारी, चित्कारी र खित्कारी मानिन्च भन्चौं ।
मान्सामुख्ति जत्ति खज्जापनी चिल्लाउने कुरै नाई । नङग्रै नहुनेले सिमेत चित्याचित्याई कन्न्याउदारी चित्त लाग्नै ता पायो । हँन्इतो ? त्याँमाँट आँनव्यानहरू पनि मस्तै आइन्चन् हेन्नोई । “तात्तो न चिस्सो लुतो न चिल्लाई, कामछैन लख्यालख्खियौं लुत्या कुक्रौं लुत्तो कन्याउ, लुत्तो न सुत्तो ओछ्यान्नु मुत्तो, क्या हो यस्तो खरङ्धरङ लुत्तो लास्तो, ज्यान गँज्जावई न लुत्तो खज्जावई, बुर्रालाई राप, लुत्तालाई काप” इत्यादि । अरुले नङ्ग्रा धस्दारी आँपूmले दार्रा कस्नेस्ता बराङ जाक्ने हेन्नोई । चल्लात्रो मुटु ग¥र्या हात्ति जत्रा सिमेत आस्सिदारी हजुरौं धोत्ती सिमेत गल्जान्च भन्चौं । ह्याँ ठकदारदेखि हकदारसम्म, जौल्याउनेदेखि हौँस्याउनेसम्म, घुस्यादेखि चुस्यासम्म, भ्रष्ट्यादेखि ख्रष्ट्यासम्म, न्वाराँनदेखि चौरासी पूज्यासम्म, रुज्यादेखि बुज्यासम्मौं प्यारो र हक्दारी ता थ्योथ्यो । जुग्नुसार ता होला अइचेल ता अमान्सलाई सिमेत नेर्राे मान्न लाइयो छ हेन्नोई । बौगुनी, बौउपयोगी हजुर्रौ लुत्वलाई व्यावास्ता गर्दारी प्वाँक्किन बेर छैन् । उइलैदेखि पल्कयाउ प्यारो तेल्लाई तँवाई हाम्ले जल्काउने ता कुरै भइन ग्यारै । बरु क्यारी हुन्च फक्काई फुल्लाई दीर्गायुको काम्ना गर्कन पल्काल्ने हो । त्यस्सो गर्न सकियौं भन्या मात्रै यस्सो हुन सक्च । ह्वाँमच्ची प सप्पैको हित गर्ला ग्यारै । कोइकसैले यल्ललाई सर्र्वारोग ठाँन्कन टार्ने प्रयास पनि नभयाउ काँ हो र ? साँउन्या सक्राँतीया सन्जेबेला सप्पैले फेरफन्ना गर्न छा¥यास्तो भया उइलै माँस्यान्थ्यो । क्या भन्दारी यो हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र संस्कार हो । यल्लाई माँस्नु भन्याउ संस्कृति माँस्नु र हजुर्रा शत्रुबैरी हाँस्नु हो ।
कुरो भाइर काँ जान्थ्यो र ? यल्ले सप्पैलाई ससिलो, रसिलो र हँसिलो बनाउँछ । फिरी हजुर्रौ त्व पनि उइलास्तो काँ छ र ? अइलौं विगासी ता भइयोे हेन्नोई । त्वा ता गोप्या र मल्लो ठाँउनु मात्रै होइन खुल्ला र रुख्खाँनु सिमेत झाँङ्यिान्च । अइलौं खुल्ला र लोकतान्त्रिक परिबेस्साई बेलानु पनि यल्लाई गोप्या ठाउँनु खुम्चिन र चोच्किन बाद्यता पार्नु ता भाँन । हँइन्तो ? खुल्ला गतिवितिले गर्दारी हजुर्रौ लुत्याजात र नाउहरू पनि अनौटाबिनौटा सुन्निया छन् ग्यारै । लाट्टोलुत्तो, बाठ्ठोलुत्तो, बाङ्ङोलुत्तो, नाङ्ङोलुत्तो, भित्¥यालुत्तो, भाइ¥यालुत्तो, बाँक्यालुत्तो, राँक्यालुत्तो, कल्ल्वालुत्तो, फोर्र्वालुत्तो, जोर्र्वालुत्तो, घुस्स्वालुत्तो, चुस्स्वालुत्तो, चोर्र्वालुत्तो, घोर्र्वालुत्तो, लुट्ट्वालुत्तो, कुट्ट्वालुत्तो, भुट्वालुत्तो, ठकक्वालुत्तो, ढुक्वालुत्तो, लुक्वालुत्तो, झुक्वालुत्तो, उल्क्यालुत्तो, पुल्क्यालुत्तो, टुल्क्यालुत्तो, सुल्क्यालुत्तो, आस्यालुत्तो, पास्यालुत्तो, गास्यालुत्तो, पिर्वालुत्तो, तिर्वालुत्तो, चाक्¥यालुत्तो, चाप्लुस्यालुत्तो, चुकिल्यालुत्तो लगाइत कति हो कति ? तेख्खा बाउ नाक्चो, नावई सम्जिन पनि टिउसिन पर्नुपर्लास्तो हेन्नोई । भोली ह्याँ, दर्जनौं थरीया तेई नामी कलिकारखन्ना खुल्दारी भोक्का, नाङ्ङा र बाङ्ङाउ सिल्लै भेटिन्न ग्यारै । दुनिया मुल्कनु रगत पसिना च्वाँउन र घरपरिवार र्वाँउन बाद्य बनाउने मुठ्ठीभरीया लुत्याहरूवा अँन्न्वार मस्किने र ओटमुख कलेटी पर्ने अफाइदा बाइक यल्ले दर्जनौं आन्ना फाइदा गर्लास्तो छ ।
दाँइन्या–दाब्र्या, अक्कास–पत्ताल जत्ताहोई खोर्सिदारी हजुर्रौ ज्यानले गुण नमान्ने कुर्रै नाई । त्व नल्लास्ता उछिट्या बिछिट्याहरूलाई झन अल्तै चित्त लाग्दो र ? जामाज्जा अच्चमए ! हजुर्रौ लुत्या फाइदा काइदैकाइदा हेन्नोई । कत्नाम्रो खाँदारी, हग्दारी, उठ्दारी, बस्दारी, पर्दारी, लर्दारी, खेल्दारी, पेल्दारी, रुँदारी, हाँस्दारी, गाउँदारी, नाच्दारी कन्न्याउ बेग्लै माज्जा हेन्नोई । बेर्रोज्जियौं बई नभेट्टेलास्तो बाल । जम्मैले रोज्गार्री पाल्ने, उत्तैनु गीत पनि गाल्ने भन्चौं । “दुब्बो झाँङ्गिो पाति मौलियो, भित्¥या मुस्सो भाइ¥या मुस्सो सप्पैै जौलियो, तल्ल चिल्लायो माथ्थि चिल्लायो, छाल्ला मात्रै होइन ज्यानको चाल्लै चिल्लायो ।” जामाँज्जा बैराक हुन्नाँए नि ? सुन्दारी पन्तै सल्लौमर्नु । ह्याँत्ती गर्ने कुरो, आइमाँसदेखि लुत्या त्यारौं उपलक्षनु खन्याउने मउत्सव मच्चालौं । ह्वाँमच्ची आँप्फैता “लट्टया गट सप्ले मान्ने कट” भइतागो । क्यार्न भन्दारी यल्लले सप्पैको हित मात्रै गर्ने, अहित कैइखो पनि नगर्ने होच्च हेन्नोई । उइछारी ह्याँ, तँवाइका बेरोजीले रोजीलाई सुक्कामनले दान्नापान्नी किल्न दिने वाल्ला छैनन् । तेइभइकिन त्यो निर्लय गर्दियौं भन्या बेरोजी कोइपनि नहुन्चई ? यस्सो गर्दारी जम्मैका छाला, गाला र चाला बाख्ल्यान्थ्या भन्चौं । समाप्त
Previous articleआहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ७, अंक ७, साउन ८ २०७६
Next articleबाँफिकोटमा स्वास्थ्य शिबिर
aahasanchar - June 22, 2018
aahasanchar - December 3, 2018
aahasanchar - January 18, 2018